In da'da analogga ah, ururinta xogta ku saabsan dabeecada-qofka sameeya waxa, iyo markii-uu qaali ahaa, oo sidaas darteed naadir ahaan. Hadda, da'da digital, dabeecadaha malaayiin qof ayaa la duubay, la keydiyay, loona falanqeyn karo. Tusaale ahaan, mar kasta oo aad gujiso websaydhka, ka wac telefoonkaaga gacanta, ama bixiso wax kaarkaaga kaarka deynta, diiwaankaaga dijitaalkaaga ayaa la abuuray oo lagu kaydiyaa ganacsi. Sababtoo ah noocyada xogtaasi waa kuwo ka yimaada falalka maalinlaha ah ee dadka, waxaa badanaa loo yaqaannaa raadinta dijitaal . Marka lagu daro raadadahan oo ay qabtaan ganacsiyada, dawladuhu waxay sidoo kale leeyihiin macluumaad aad u qanacsan oo ku saabsan dadka iyo ganacsataba. Wadajir ahaan ganacsiyada iyo diiwaannada dawladda ayaa badanaa loogu yeeraa xog weyn .
Dooxada weligeedba sii kordheysa ee xogta macnaheedu waxay tahay in aynu ka soo guuray adduunka oo xogta akhlaaqda ay ku yartahay adduunyo halkaas oo xogta habdhaqanka ay tahay mid ballaaran. Tallaabada ugu horreysa ee barashada xogta weyni waxay ogaanaysaa inay qayb ka tahay qaybo badan oo xog ah oo loo adeegsaday cilmi-baaris bulsheed sanado badan: xogta la socota . Qiyaas ahaan, xogta indha-indheyntu waa macluumaad kasta oo ka dhalan kara indha-indheynta hab-nololeedka ah iyada oo aan si ficil ah u dhexgalin. Habka xun ee looga fekerayo waxa weeye in xogta fiirinta ay tahay wax kasta oo aan ku lug laheyn dadka (tusaale ahaan, sahan, mowduuca cutubka 3) ama isbeddelka degaanka dadka (tusaale, tijaabo, mawduuca cutubka 4). Sidaa darteed, marka lagu daro diiwaanka ganacsiga iyo dawladda, xogta fiirinta waxaa sidoo kale ku jira waxyaabo ay ka mid yihiin qoraalka wargeysyada iyo sawirada satellite-ka.
Cutubkani wuxuu leeyahay saddex qaybood. Ugu horreyn, qaybta 2.2, waxaan qeexayaa ilaha xogta ee faahfaahin badan oo caddaynaya farqiga u dhexeeya iyaga iyo xogta sida caadiga ah loo adeegsaday cilmi-baaris bulsheed hore. Ka dib, qaybta 2.3, waxaan qeexayaa toban sifooyinka guud ee ilaha xogta waaweyn. Fahminta sifooyinkaasi waxay kuu sahleysaa inaad si dhakhso ah u aqoonsato xoogga iyo daciifnimada ilaha hadda jira waxayna kaa caawinaysaa inaad ka fogaato ilaha cusub ee mustaqbalka la heli doono. Ugu dambeyntii, qaybta 2.4, waxaan qeexayaa saddex xeeladood oo cilmi-baaris oo muhiim ah oo aad isticmaali karto si aad uga barato xogta la socota: tirinta waxyaabaha, saadaalinta, iyo qiyaasidda tijaabada.